ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၁-၄-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၁-၄-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိရုပ်ရှင် ဇာတ်ညွှန်းကိစ္စပြီး၍ ကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်နေပြီ click
- ဥပဒေစိုးမိုးမှ ပဋိပက္ခဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- မီးရှို့ဆန္ဒပြရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ပါဝင်မှု မွတ်စလင်များ ရှင်းချက်ထုတ် click
- ကောလာဟလများကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် ရှင်းရသည့် ရေကျော် ဗလီမီး click
- ဗလီ မီးလောင်မှု ကော်မရှင်တွေ့ရှိချက် အစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့များ လက်ခံ click
- ထိုင်းရောက် ရိုဟင်ဂျာများ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးမည် click
- မြန်မာပြည်အတွက် ဆုတောင်းရေးကွန်ရက် နောက်ကွယ်တွင် ပံ့ပိုးသူမရှိဟုဆို click
- ဖိုးလပြည့်၏ စော်ကားခံရခြင်း မှန်ကန်ဟု ကာယကံရှင် ပြောပြီ click
- မြန်မာပြည်ရဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးမှာ ဘာပြဿနာတွေ ရှိနေလဲ (ဖိုရမ်) click
- မဒေးကျွန်းတွင် ရွာသားများ သဘောထားဖြင့် CNPC ကုမ္ပဏီကို ဆန္ဒပြသွားမည်ဟု သိရ click
- တရုတ်ကုမ္ပဏီအား ဆန္ဒပြမည့်ရက်ကို သင်္ကြန်ပြီးနောက် ရွှေ့ဆိုင်း click
- မြေသိမ်းမှု မဖြေရှင်းပေးရင် ဆန္ဒပြမှု ဖြစ်ပွားနိုင်ဟု ရှမ်းပါတီ ပြော click
- တောင်သူလယ်သမား ပံ့ပိုးရေးဥပဒေ ဇွန် လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုနိုင်မည် click
- သာသနာ့မြေနှင့် အဆောက်အဦများအတွက် စိစစ်မှု များပြား click
- မိုးညိုတရားရုံးက သတ်မှတ်ချိန်ကျော်လွန် အပြင်ထွက်သူများကို ထောင်ချ click
- စစ်တွေ ဆန္ဒပြ ဦးဆောင်သူ ၂ ဦး တရားစွဲခံရ click
- ဘူးသီးတောင်လေလံကိစ္စ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရရေး ပြည်နယ်ရုံးထိ စာတင် click
- မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေး လုပ်ကွက် ၃၀ ကို လေလံတင် click
- UNFC နှင့် အစိုးရ ပြန်တွေ့ရန် ရွှေ့ဆိုင်းထား click
- ကချင်ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန်လာသော ကုလသမဂ္ဂ ယာဉ်တန်းကို အစိုးရ တားမြစ် click
- ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းမှော်တွင် သာမန်ပြည်သူများ ၀မ်းစာရှာရန် ခက်ခဲလာ click
- SSA နှင့် အစိုးရတပ်မတော် တိုက်ပွဲကြောင့် ပြေးရှောင်ရသည့် ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်မည် click
- ရှမ်းမြောက်ပိုင်း မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး SSA ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေ click
- ၂ နှစ်သား အစိုးရကနေ ပြည်သူတွေ ဘာရလိုက်သလဲ (ဆောင်းပါး) click
- ရန်ကုန်တွင် ခုံးကျော်တံတားများ ထပ်ဆောက်ရန် စီစဉ်နေ click
- WFP အကူအညီဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာ တန်ချိန် ၁ သိန်း ၇ သောင်းကျော် ဖြန့်ဝေမည် click
- နေပြည်တော်အနီး ရစ်ခ်ျတာစကေး ၅.၅ အဆင့်ရှိ ငလျင်လှုပ် click
- ကယားပြည်နယ်၊ ထိုင်းနယ်စပ်တွင် ၅.၁ ငလျင်လှုတ်ခတ်သွား click
- မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်း ကား တိမ်းမှောက်၊ ၄ ဦးသေ ၇ ဦး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရ click
- ရေမရ၍ လယ်သမားများ စပါးစိုက်ရန် အခက်အခဲ ကြုံနေကြရ click
- မြန်မာသံရုံး အကူအညီဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ လျော်ကြေးရရှိ click
- နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်များကို စမတ်ကတ်အဖြစ် ပြောင်းနိုင်ရန် စမ်းသပ် click
- ပင်စင်လစာများ လျှောက်စရာမလိုဘဲ ထုတ်ခွင့်ရရေး ဆောင်ရွက်နေ click
- ဝန်ထမ်းလစာ တိုး၍ ရန်ကုန် ကူးတို့ခများ နှစ်ဆတိုး ကောက်မည် click
- လူထုအခြေပြု ဖွံ့ဖြိုးရေး အမျိုးသားစီမံကိန်းအတွက် ပြိုင်ပွဲများ ဖိတ်ခေါ် click
- အမျိုးသားသတင်းဆုများ ချီးမြှင့်မည် click
- သင်္ကြန်အတွင်း လုံခြုံရေး ပြည်သူများ ပူးပေါင်းကူညီကြရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောကြား click
- တောင်တွင်းကြီးမြို့တွင် သင်္ကြန်အလှပြနှင့် သံချပ်ယာဉ်များ ခွင့်ပြုမိန့် မရသေး click
- ကျေနပ်သည်အထိ တောင်းပန်မှ ကျေအေးနိုင်မည်ဟု အမရာဒ်ငြိမ်း ပြော click
- ဟင်္သာတမြို့ တာငါးဆယ်ရပ်ကွက် ဆွေးမြေ့ဓာတ်တိုင်တွေ လဲပေးပါ (ပေးစာ) click
- ပုဂ္ဂလိကျောင်းများက ပညာရေးအရည်အသွေး တိုးတက်လာစေရန် ကူညီပေးနေ (ရုပ်သံ) click
- မြန်မာနိုင်ငံတွင် စာကြည့်တိုက်အရေအတွက် သောင်းဂဏန်းရှိသော်လည်း စာအုပ်အမျိုးအစား စုံလင်မှုနှင့် ငှားရမ်းမှုစနစ်မှာ အားနည်းလျက်ရှိကြောင်း သိရ click
- လူငယ်များကို လက်တွဲခေါ်ပါ (သူ့အမြင်) click
- ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာတပါး မည်၏ (ဆောင်းပါး) click
- မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးကျည်ကို ကာကွယ်ရန် အမေရိကန် ပြင်ဆင် click
- သင်္ချာသင်ကြားရာတွင် လက်ဟန်ခြေဟန်သုံးပြီး ရှင်းလင်းခြင်းက ပိုမိုထိရောက် click
- ဘာစီလိုနာနဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တို့ ချန်ပီယံ လိဂ် ဆီမီးဖိုင်နယ် တက် click
- နယ်သာလန်၊ အင်ဒိုနီးရှား ဟင်းလျာ မြည်းစမ်းလိုသူတို့ ပျော်ရာ (အသံ) click
maung san kont,
The story you write about the Military Government was very good to read.You are the good writer.You wrote in that story the military government was ruled to our country very bad method.
But I wanted to ask you "What are you doing?,What do you do? If you are the leader how will you do.
It is very easy to speak but difficult to do.
Today we are not sitting in the tea shop.You are written the tea shop way.You have to make your knowledge like the politician,now your knowledge is like sidecar worker .